Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Mana marii bakka bu'ootaf haala yeroorratti ib });
Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Mana marii bakka bu'ootaf haala yeroorratti ib
Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad Mana marii bakka bu'ootaf haala yeroorratti ibsa kenna jiru.
Dhimmoota dinagdee Itiyoophiyaa akka sirnaan hin guddaane godhan adda baasuun ibsa jiru.
Dhaabbilee Mootummaan baasii guddaa itti baasuu kanneen akka Telee fi Ibsaa ilaalchisee xiyyeeffannoo guddaa barbaadu, fedhii ummata keenya guutuu hin dandeenye, dinagdeen keenyas saffisaan akka hin guddaane godhan.
Daandiin Xiyyaara Itiyoophiyaas akka Ardii Afrikaati sadarkaa gaariirratti argamus qaama tokko qofan guddina yaadame fidu hin danda'u jedhan. Kanaafu dhaabbileen dhuunfa sektara kanarratti akka hirmaataniif murtee dabarsuun isaa ni yaadatama jedhan.